Namni Muslima hin taane hundi ibidda seenaa? - NuuralHudaa
Namni Muslima hin taane hundi ibidda seenaa?
Qophii: Ustaz Abdul Jabbaar Aliyi
Tun gaafii namni hedduun gaafatuufi haalaan barbaachiftu. Deebii armaan gaditti dubbifadhaa.
Rabbiin Qur’aana Suuraa Aali-Imraan Aayata 85 irratti, warri Islaama hin filatin warra kasaare tahuu hime. Qiyaamaa warra kana adabaatu eeggata.
* وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ *
* Nama Islaamummaa malee amantii biroo filate Rabbiin isa irraa hin fuudhu. Inni guyyaa boodaa warra kasaare irraahi *
Ammoo Suuraa Al-Israa’ Aayata 15 irratti, dura ergamtoota isaa itti ergee yoo didan malee ummata tokkollee kan adabu akka hin taane Rabbiin ibse.
* وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولً *
* Hanga ergamaa itti erginutti kan adabnu hin taane *
Rasuulliﷺ “ummata kanarraa Yahuudaa ykn Nasaaraanis ergamuu kiyya dhagayee waan an ittiin ergametti osoo hin amanin ka du’e warra ibiddaa irraa tahu malee hin hafu” ja’an. [Muslim 153]
Warra Muslima hin taane Ulamaan bakka 4tti qoodan.
1. Nama ergamni Nabi Muhammadﷺ isa hin dhaqqabin. Kana Rabbiin isa hin adabu.
2. Nama maqaa Muhammadﷺ dhagayee, garuu dhageettii qorannaaf geessu hin dhagayin. Kunis akkuma ka duraatti Rahmanni godhamaaf.
3. Warra maqaa Muhammadﷺ fi waan isaan ergamaniinis sirritti dhagahe, garuu kan qoratuu didee waan irra jirutti(Kafaree) hafe. Namni kun ‘kan irraa garagale(معرض)’ ja’ama. Kana ragaan irra dhaabbatee waan jiruuf ni adabama.
4. Kan Muhammadﷺ dhagayee, waa’ee Isaamaatis dubbisee qoratee garuu ‘quubsaa naaf hin taane’ je’ee dide. Kun mormaa(عنيد) ja’ama. Akkuma ka Sadeessoo kana ni adabama.
Islaamummaan nama qorateef ifa. Namni qorate ragaa guutuu, kaayyoo uumameef asii argata. Karaa haqaafi ifa bahaa tahetti Rabbiin nu yaame. Qalbiin haqa barbaaddu hundi ni fudhatti. Qur’aana Suuraa Al-Baqraa, Aayata 99 irratti Rabbiin akkana ja’a..
*وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ*
*Dhugumatti keeyyatoota ifa bayoo tahan gara keetitti buufnee jirra. Faasiqa(mata jabeessa) malee namni mormu hin jiru*
Akkuma janne, lakkoofsi 1 fi 2 warri ergaan hin gayiniifi yaada guutuu hin dhagahin(jechuunis warri moggaa dhagayee, qoratuuf carraa hin arkatin) Rahmanni ni godhamaaf. Ammoo jara kanaafi daa’imman isaanii boru maal mudatan yaada ja’urratti Ulamaan waan dubbatan qaban?
Imaam Gazaaliin “warra kana Rabbiin Rahmataan isaan haguuga” ja’e.
Ibnu Teymiyyaa fi Ibnul Qayyim “guyyaa boodaa(aakhiraa) Rabbiin isaan qormaatee, nama qajeele Jannata naqa. Kaan ammoo Azaaba seensisa” je’an.
Namni Nabi Muhammadﷺ ergamuu dhagahee, waan Muhammad ergameenis sirritti dhagahee garuu firinxiixee dide shakkii malee ibidda seena. Kun nama ragaan irra dhaabbate waan tahee ni adabama. ‘Namni ragaan isarra dhaabbate’ je’amu yeroo yerotti biyyaa biyyatti namaa namatti wol dhaba. Akka Muslimaatti dirqamni guddaan nurra jiru, nuti nama dandeennu cufa biraan ergaa Islaamaa gayuu qabna.
July 30, 2021 sa;aa 4:42 pm Update tahe